Amanda Gaston, Author at Hissho Sushi
ဧပွီ 22, 2016 ဆုများနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းများဘလော့ဂ်သတင်း က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
Hissho သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အနာဂတ် 50 ဆုရရှိသူအဖြစ်ဂုဏ်ပြုခံရသည်
Hissho Sushi သည် 2016 အတွက် Smart CEO Future 50 Award ကိုဂုဏ်ယူစွာခံယူသူဖြစ်သည်။ ဂုဏ်အသရေကို2016ပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၆ ကြာသပတေးနေ့၊ Hilton Centre City ဟိုတယ် (Charlotte, NC) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
SmartCEO သည်ဒေသ၏အလျင်အမြန်တိုးတက်နေသောအလယ်အလတ်ကုမ္ပဏီများအနက်မှ ၅၀ ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ကြီးမားသောအပြာရောင် Chip နှင့်ကြီးမားသော“ Emerging Growth” အမျိုးအစားငယ်များကိုလည်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဤကုမ္ပဏီများသည်ဒေသ၏စီးပွားရေးအနာဂတ်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးသည့်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ကိုဖော်ဆောင်သည်။ အောင်မြင်သူများကိုပျမ်းမျှ ၀ န်ထမ်းသုံးနှစ်နှင့်ဝင်ငွေတိုးတက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဤစုပေါင်းမှုသည် ၄ င်းတို့၏ရပ်ရွာလူထုအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ Charlotte Future 50 ၏စုစုပေါင်းဝင်ငွေသည် ၁TP2T1.5 ဘီလီယံဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှစီးပွားရေးသက်တမ်းမှာ ၁၃ နှစ်ဖြစ်ပြီးလူ ၁၁၀၀၀ နီးပါးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် SmartCEO သည်အနာဂတ်စျေးကွက် ၅ ခုဖြစ်သော Baltimore၊ Boston၊ Charlotte, Long Island, New Jersey, New York City, Philadelphia နှင့် Washington, DC တို့ကိုဂုဏ်ပြုမည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်သွားပါ www.smartceo.com
Charlotte NC တွင်ရုံးချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားသော Hissho Sushi သည်ဆူရှီနှင့်ပနားမား Asian franchise စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးပြည်နယ် ၃၉ ခုမှပြည်နယ်ပေါင်း ၃၉ ခု၊ ကိုလံဘီယာခရိုင်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ CEO ဖြစ်သူ Philip Maung သည်မြန်မာနိုင်ငံမှအမေရိကန်သို့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး $13 သာသူ၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ဆူရှီလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။
Hissho ကို Fast 100 Asian American Business အဖြစ်သတ်မှတ်သည်
US Pan Asian American ကုန်သည်ကြီးများအသင်းက Hissho Sushi ကို“ အမြန်ဆုံးအာရှသား ၁၀၀ ကုမ္မဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးစိန်ခေါ်မှုများကြားမှ Fast 100 သည်နှစ်စဉ်အမြတ်ငွေ ၁ ဘီလီယံ ၃ ဘီလျံရရှိခဲ့သည်။ Hissho ရဲ့လှူဒါန်းမှုဟာအမေရိကန်ဘဝရဲ့စီးပွားရေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်။
Charlotte NC တွင်ရုံးချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားသော Hissho Sushi သည်လက်ရှိပြည်နယ် ၃၉ ခုနှင့်ကိုလံဘီယာခရိုင်တွင် ၈၇၈ နေရာရှိသည့်တိုးတက်သောဆူရှီ / နှင့် / သို့မဟုတ်ပူဘားဆိုင်ခွဲလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ CEO ဖြစ်သူ Philip Maung သည်မြန်မာနိုင်ငံမှအမေရိကန်သို့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး $13 သာသူ၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ဆူရှီလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 25, 2016 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
02.25.16 | Preparing to Bring Hissho's Sushi to You!
Hissho continually brings in new Franchisees to our Headquarters in Charlotte, NC for weeks of extensive training. Some come with experience, and some not. However, at the end of the training period, all leave with the skills in place to operateahealthy, functioning, profitable business which they will own. Hissho offers this cost effective opportunity to motivated individuals. This week, Hissho is training9new individuals who will be running their own sushi bars across the country, from California to New York. The nice part about their training is that for one week, we get to purchase the sushi they make for $2. All of the money made from both our sushi and/or hot bar, goes to our Hissho Foundation fund.
Where else could you pay only $2 for suchadelicious, healthy, fabulous lunch or dinner; and contribute toaFoundation Fund at the same time. A win-win all around! If you’d like to be part of our Hissho team, please contact us for more information:
https://hisshosushi.com/becomefranchisee/ & https://hisshosushi.com/careers/
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 17, 2016 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
02.17.16 | Hissho Shows Heart for Valentine's Day
Hissho reached out to recent refugees from Myanmar (Burma) by providing them with Hissho Rice, and hygiene items purchased from the Core Values budget. When refugees immigrate to America, they are often left to fend for themselves after onlyafew short weeks. Imagine if you didn’t know the language, didn’t have transportation, and were “thrown” intoatotally new environment, where all you had wasafew others in the same boat.
Lost inasea of loneliness, 23 senior refugees came together to join forces to showaunified front. This meeting was in the home of another settled immigrant from Myanmar, who graciously offered his home for this meeting. Young people in the community also came to help out by doing the translating, serving the delicious homemade chicken and rice soup prepared just for this occasion, and even showing the elderly how to use nail clippers. If you’d never seenanail clipper, would you know what it was, or how to use it?
With essentials that we often take for granted: toilet paper, towels and wash cloths, bars of soap, small zip-lock bags filled with hotel amenities collected over time byaHissho co-worker, and, of course, the nail clippers were all eagerly and gratefully received by each person who sat and waited so patiently for their name to be called. The 50 pound bags of rice looked bigger than many of the ones who came to “collect.” Strong young men carried it to the cars of those who volunteered to transport our guests.
After the distributions were made, we all sat together to enjoy the thick, fragrant, healthy, chicken and rice soup. I can honestly say it’s the absolute best chicken and rice soup I’ve ever had. It was probably the fact that the6chickens used were purchased by two Burmese Hissho co-workers fromaBurmese farmer, and donated to the cause. Totally natural: no hormones, no cages! The few hours our Hissho staff spent doing these small things, were overwhelmingly beneficial for all who were there.
Many times, we need only look around our immediate vicinity to see dire needs, and if you can help makeadifference, please do.
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 11, 2016 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
02.11.16 | Hissho Mein Bowl
Hissho Sushi isn’t just about sushi. With our growth has come several off-shoots that continue to grow and expand. Our University locations especially love our Mein Bowl program under Sodexo, that boastsahot bar filled with really fresh vegetables, beef, chicken, shrimp, tofu and lots of condiments.
Mein Bowl Menu
Entrée & Rice or Noodles / $6.49
Entrées & Rice or Noodles / $7.49
Entrées & Rice or Noodles / $7.99
Mein Bowl offers five weekly entrees in rotation.
The program offers delicious healthy meals at affordable price points in University locations from the East Coast to the West Coast.
If your University has one of our Mein Bowls, do let us know!
ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 1, 2016 သတင်း က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
February | Hissho Super Contest Rules
Hissho is giving away an awesome prize pack to one lucky fan!
Like Hissho Sushi’s Facebook page: facebook.com/hisshosushi
Comment #ThatsHowIRoll on the Pinned Post at the top of our Facebook Page, to let us know you’reaFacebook fan now!
An extra entry will be given to those that Retweet any #ThatsHowIRoll tweet from Hissho’s Twitter account: @hisshosushi
We will chooseawinner at random on Wednesday, February 17th.
Other Rules of Engagement
The contest officially begins on February 1, 2016, and ends on February 12, 2016, at 11:59pm EST
The winner will be announced on February, 17, 2016.
အနိုင်ရသူများသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင် Hissho ၏ပရိသတ်များဖြစ်ရမည်။
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook or Twitter.
မသင့်လျော်ဟုမှတ်ယူသောမည်သည့် entry ကိုမဆိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
Winner will receiveaHissho prize pack consisting of:a“That’s How I Roll” Hissho t-shirt, select Hissho sauces and other promotional items.
ကျေးဇူးပြု၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ၂ ပတ်အထိခွင့်ပြုပါ။
Winner will be notified via Facebook
Entrants must agree to allow Hissho Sushi to publish their name on the Hissho Facebook Page
ဇန်နဝါရီ 27, 2016 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
01.27.16 | Inspiration & Wisdom ၏စကား
သင် Hissho ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကို“ မိသားစု” လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာမင်းသိပြီးသားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုအပ်လာသောအခါတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ကူညီရန်အစပြုပြီးအမြဲတမ်းအားပေးထောက်ခံရန်ကြိုးစားကြသည်။ အလုပ်မှာသာမကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွက်ပါပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၆၀ သည်ပင်မရုံး၌နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရယ်မောရန်၊ အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အတူတကွကစားရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကတန်ဖိုးထားမှုကော်မတီသည်ယခုအခါကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံပတ် ၀ န်းကျင်တွင်“ စကားလုံးများဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်ဥာဏ်ပညာ” ကိုရေးသားရန်အားထုတ်မှုကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ငါတို့စတင်ခဲ့ကြသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ပေါ်လာသောနိမိတ်လက္ခဏာများရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမျှဝေရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။ သင်၌စိတ်ရှုပ်နေလျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချို့ကိုထပ်မံထည့်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင် Charlotte ကိုရောက်နေရင်ကျွန်တော်တို့ဆီလာလည်ပါ။ သင့်ကိုကြိုဆိုပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 20, 2016 ဆုများနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းများဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
01.18.16 | Grant Thornton က Hissho ဆူရှီကိုအသိအမှတ်ပြုသည်
Grant Thornton က Hissho Sushi ကို North Carolina မှထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ထဲမှတစ်ခုအဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အသိအမှတ်ပြုလိုက်သည်။ ယခုနှစ်စတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
“ ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင်ချီကာဂို၌စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Grant Thornton LLP (Grant Thornton) သည်အမေရိကန်၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် Grant Thornton အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလီမိတက်လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်၊ အခွန်နှင့်အကြံပေးကုမ္ပဏီများ၏ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ” - ထပ်မံကြည့်ရှုရန် - http://www.grantthornton.com
ဘယ်လိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ Grant Thornton North Carolina သည် ၁၀၀ သည်တက်ရောက်သူများကပေးသောအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ မကြာသေးမီဘဏ္fiscalာရေးနှစ်တွင် ၀ င်ငွေဖြင့်ပြည်နယ်၏အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ယခု ၃၁ နှစ်မြောက်တွင် NC100 သည်မြောက်ကာရိုလိုင်းနားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများသို့လူသိရှင်ကြားကုန်သွယ်မှုမရှိသောကုမ္ပဏီများအတွက်ကန့်သတ်ထားသောစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများကိုခွင့်ပြုထားသည်။
၎င်းသည် Hissho အတွက်ကြီးမားသောဂုဏ်ယူမှုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေကြောင်းဖော်ပြခြင်း အဲဒါကိုအလုပ်လုပ်အောင်အဖွဲ့ကအားစိုက်ထုတ်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Philip Maung နှင့် Hisshonians အားလုံးကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 6, 2016 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
01.06.16 | မင်္ဂလာနှစ်သစ် ၂၀၁၆ "မျောက်နှစ်"
Hissho ကတစ်ယောက်စီကို ၂၀၁၆ အတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ်ကိုလိုလားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၁၅ သည်တိုးတက်မှုနှင့်ကောင်းချီးများစွာတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်နေပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ ဆက်လက်၍ မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူဆူရှီနှင့်ပူဖောင်းစားဖိုမှူးများ ၀ ယ်လိုသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူတစ် ဦး ဦး သည်ကျွန်ုပ်တို့၏“ မိသားစု” နှင့်ပူးပေါင်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ နှင့်စကားလုံးလွန်။
လစဉ်လတိုင်း Hissho သည်မွေးနေ့ကဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများထံသို့ပေးပို့သည်။ ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၌စုစုပေါင်း ၁၉ နှစ်မွေးနေ့ရှိသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အရွယ်အစားရှိကုမ္ပဏီ၌၎င်းသည်အလွန်ထူးခြားပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ထူးဆန်းသည်။ ဒီတော့နည်းနည်းလေးရှာဖွေခြင်းဖြင့်ဒီအထူးကလေးငယ်များအတွက်အသေးအဖွဲအချက်များကိုစုဆောင်းမိသည်။ အံ့ is စရာကောင်းတာကအရာရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မော်ဒယ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပုံရသည်။
“ လရဲ့ ၁ ရက်နေ့မှာမွေးတာကသင်ဟာလွတ်လပ်မှု၊ သစ္စာစောင့်သိမှု၊ ဇန်န ၀ ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသောသူများအတွက်ကိန်းဂဏန်းနံပါတ်ကို ၁ ဖြစ်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းအရေအတွက်အောက်တွင်မွေးဖွားသူများသည်များသောအားဖြင့် ဦး ဆောင်မှုအရည်အသွေးများ၊ ကြီးမြတ်သောအလိုတော်ရှိခြင်းနှင့်ဘ ၀ အတွက်ထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှု၊ ထို Capricorn ရှိသူများသည် numerology ၌နံပါတ် ၁ နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုပျော်ရွှင်သင့်သည်၊ အကြောင်းမှာဘဝတွင်အောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားသူများ၊ ရုပ်ပုံကြီးများကိုကိုင်တွယ်ရန်စွမ်းရည်ရှိပြီးသူတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုလိုက်နာရန်ရည်မှန်းထားသူများဖြစ်သောကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ငါတို့ရဲ့ရာထူးတွေကဘယ်သူမဆိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီစရိုက်တွေကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ဒီသင်တန်းတွေအားလုံးဟာ Hissho အတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
“ ဇန်နဝါရီလမှာမွေးဖွားသူတွေဟာရည်မှန်းချက်ကြီးပြီးအလုပ်ကြိုးစားကြတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၁ ရာသီခွင်ရှိလူများသည်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ဇန်န ၀ ါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားသူများကိုအရင်းအမြစ်နှင့်လက်တွေ့ကျသည်ဟုသရုပ်ဖော်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်စည်းကမ်းအားလုံးနှင့်မပါ ၀ င်သောလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ”
တနည်းအားဖြင့်ဤအချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Hissho စားဖိုမှူးများအတွက်ဆူရှီသို့မဟုတ်ပူဘားတွင်အပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
“ သူတို့ကတက်ကြွပြီးအလုပ်အသစ်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုသိချင်ကြတယ်။ တစ်ခုခုမစခင်သုတေသနလုပ်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ကပညာရေးနှင့်အသိအမြင်ကိုကြီးစွာပေးဆပ်ခဲ့ကြပြီးတရားမျှတသောတရားမျှတမှုကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။ တခြားသူတွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုအများကြီးဂရုစိုက်ပြီးသူတို့ဝန်းကျင်ရှိလူတွေကိုသဘာဝကျကျကူညီဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ ”
Hissho တွင် ၀ န်ထမ်းသို့မဟုတ် franchisee ၀ န်ထမ်းတိုင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ in များ၌သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်ကျယ်ပြန့်သောလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောလေ့ကျင့်မှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Hissho မိသားစုသို့ ၀ င်ခြင်းဖြင့်တစ်နှစ်တာစတင်ခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းသားအသစ်များကိုထင်ဟပ်ပြသည်……… .. သူတို့ကိုကြိုဆိုပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ 30, 2015 ဘလော့ဂ် က Amanda Gaston0မှတ်ချက်များ
12.30.15 | Hissho ကဒီခရစ်စမတ်ကိုပြန်ပေးတယ်
Hisshonians သည်ခရစ်စမတ်နံနက်ခင်းကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့၌ကျင်းပသည်။ 70 နဲ့o အပြင်ဘက်ရာသီဥတုနှင့်နေထွန်းလင်းလာခြင်းသည်ဒီဇင်ဘာလခရစ္စမတ်နေ့ထက်နွေ ဦး ရာသီနှင့်တူသည်။ team ည့်သည်များနှင့်မိသားစုများအတွက်နံနက် ၁၁:၃၀ ညစာအတွက်ပြင်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်မီးဖိုချောင်တွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Philip Maung သည်သူ၏ဇနီးနှင့်သားနှစ်ယောက်ကိုပါ ၀ င်စေခဲ့သည်။ အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏သမီးသည်အချိုပွဲများကိုဖြတ်တောက်ရန်၊ နေရာချရန်၊ ပူနွေးရန်လိပ်များပြင်ဆင်ရန်နှင့်အခြားတာဝန်များထမ်းဆောင်ရန်ရာထူးများကိုပြည့်နှက်ခဲ့သည်။
မီးဖိုချောင်ကိုကျွန်တော်တို့စီမံနေတုန်းတခြားစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းတွေရဲ့စစ်တပ်က guests ည့်သည်တွေကိုဈေးကြီးတဲ့အဆောက်အအုံလိုပဲတစ် ဦး ချင်းစီကိုကျွေးမွေးဖို့အနက်ရောင်ပျော့ပျောင်းသောရှပ်အင်္ကျီအဖြူရောင်အနက်ရောင်လည်စည်းများကို ၀ တ်ဆင်သည်။ ဒါရိုက်တာတိုနီမာစီယာနိုက“ Charlotte ဟာတိုင်းပြည်မှာတစ်ခုတည်းသောစက်ရုံပဲ၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့်မာစီယာနိုက“ the ည့်သည်များသ